असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएकोमा असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
नेताले आदेश दिए पुग्ने र कार्यकर्ता आदेश कुरेर बस्‍नुपर्ने अवस्था रहेको भन्‍दै उनले कांग्रेस पुनर्निर्माण गर्न सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले प्रश्‍न गर्दै भनेका छन्, ‘बस नेताले आदेश दिए पुग्ने, कार्यकर्ता आदेश कुरेर बस्नुपर्ने ! अब नि यस्तो बेहालमा पार्टी चलाइरहने कि बदल्ने ? सोचौं।’ । थपमा (प्रेम काहानी )
हाम्रोमा विभिन्न प्रकारका बहसहरू चलिरहेकै छन् । हुर्काइको फरक पृष्ठभूमिका कारण मेरो आफ्नै बुझाइ बनेको छ । प्रेम भन्ने बित्तिकै हामी चोखो, पवित्र, ‘
Prevपरिवार भेट्न छुट्टि लिएर नेपाल आउँदै गर्दा बीच बाटोमै अस्ताए यी इन्डियन लाहुरे,फोटो छोई रिप लेख्नुहोस आत्मा ले शान्ति पाउनेछ ।